6kw-30kw Kubota အင်ဂျင် Generator ကို ပေးသွင်း,ထုတ်လုပ်သူ - Fmwpower.com
ဒီဇယ်အင်ဂျင် Generator ကို
အနိမျ့ဆူညံသံ Generator ကို
နေအိမ် ဒီဇယ်အင်ဂျင် Generator ကို
6kw-30kw Kubota အင်ဂျင် Generator ကို
12kw-300kw ရီကာဒိုအင်ဂျင် Generator ကို
ရီကာဒိုမီးစက်တစ်စုံ ရီကာဒိုစီးရီးဒီဇယ်အင်ဂျင်၏တက်လုပ်ပေါင်း FMW ဖြစ်ပါတယ် Deepsea, ComAp သို့မဟုတ် Smartgen မီးစက်ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူ brushless AC အမီးစက် module တွေ။ ပါဝါစ Range: 300kw မှ 12kw ပွင့်လင်း Frame က Generator ကိုထိုမြတ်သောအမျိုးအစား Generator ကိုနှစ်ဦးစလုံး
150kW အနိမျ့ဆူညံသံ Generator ကိုရန် 8kW
အနိမျ့ဆူညံသံ Generator ကို 8kw ထံမှ 150kw အထိသေးငယ်တဲ့အရွယ်အစားဖြစ်ပါသည် အသံတိတ်ဒီဇယ်မီးစက်တစ်စုံ ။
500kW အနိမျ့ဆူညံသံ Generator ကိုရန် 150kW
အနိမျ့ဆူညံသံ Generator ကို 150kw ထံမှ 500kw အထိအဆိုပါအလတ်စားဖြစ်ပါသည် အသံတိတ်ဒီဇယ်မီးစက်တစ်စုံ။
24kw-1800kw တတ်အင်ဂျင် Generator ကို
တတ်မီးစက်တစ်စုံ တတ်ဒီဇယ်အင်ဂျင်၏တက်လုပ်ပေါင်း Stamford ဖြစ်ပါတယ် Deepsea, ComAp နှင့်အတူမီးစက်, Leroy Somers မီးစက်သို့မဟုတ် FMW brushless မီးစက် သို့မဟုတ် Smartgen မီးစက်ထိန်းချုပ်မှု module တွေ။ ပါဝါစ Range: 1800kw မှ 24kw ပွင့်လင်း Frame က Generator ကိုထိုမြတ်သောအမျိုးအစား Generator ကိုနှစ်ဦးစလုံး
24kw-160kw lovol အင်ဂျင်မီးစက်
Lovol မီးစက် Lovol ဒီဇယ်အင်ဂျင်နှင့် Stepford မီးစက်၊ Leroy Somer မီးစက်သို့မဟုတ် Deepsea, ComAp သို့မဟုတ် Smartgen မီးစက်ထိန်းချုပ်စက်များပါဝင်သော FMW brushless generator တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ပါဝါအကွာအဝေး: 24kw 160kw မှ Open Frame Generator နှင့် Canopy Type Generator နှစ်မျိုးလုံး
184 စီးရီး brushless synchronous ac alternator
(၁၂kwkw-၄၁kw) FMW brushless alternator ဒီအထွက်၏ အတိုင်းအတာကိုမူရင်း Stamford AC မီးစက်နှင့်ကိုက်ညီစေရန်ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ထားသည် PI144 စီးရီးနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များ, တစ် ဦး ချင်းစီနှင့်အပိုပစ္စည်းများနှင့် အသွင်အပြင်ဒီဇိုင်း။
Kubota မီးစက်တစ်စုံ Kubota ဒီဇယ်အင်ဂျင်၏တက်လုပ်ပေါင်း Stamford ဖြစ်ပါတယ် Deepsea, ComAp နှင့်အတူမီးစက်, Leroy Somers မီးစက်သို့မဟုတ် FMW brushless မီးစက် သို့မဟုတ် Smartgen မီးစက်ထိန်းချုပ်မှု module တွေ။
ပါဝါစ Range: 30kw မှ 6kw
ပွင့်လင်း Frame က Generator ကိုထိုမြတ်သောအမျိုးအစား Generator ကိုနှစ်ဦးစလုံး
item NO ။:
Kubota မီးစက် တို့ကပိုမိုနှစ်သက်နေသည် ၎င်း၏အမြင့်ဆုံး output ကို, ကျစ်လစ်သိပ်သည်းခြင်းနှင့်အလင်းအလေးချိန်နှင့်မြင့်မားသောကြောင့်အချို့သောဖောက်သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစျေးကွက်အတွက်ယုံကြည်မှုအဆင့်အထိ။ ၏အကြီးမားဆုံးသောအားသာချက် Kubota မီးစက်တစ်စုံ နည်းပညာဖြစ်ပါတယ် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များနှင့် application အင်ဂျင်နီယာတုံ့ပြန်ရန်။ Kubota ဒီဇယ်မီးစက် အမြဲရှိပါတယ် ဒါကြောင့်တင်းကျပ်သောထုတ်လွှတ်မှုထိန်းချုပ်ခြင်းတညီတည်း က အမြဲသူအခြို့ထူးခြားတဲ့နှင့်အထူးဖောက်သည်ကျေနပ်နိုင်ပါတယ် အလွန်အမင်းထုတ်လွှတ်စံချိန်စံညွှန်းများလိုက်နာရန်ရှိသည်။ ၏တနျခိုးအကွာအဝေး Kubota genset နေ 6kw သို့ 30kw ။
1. Kubota အင်ဂျင် Generator ကိုပင်မ Specification
2. Kubota Generator ကို Se t ကို
3. Generator ကိုအင်္ဂါရပ်များနှင့်ထောက်ပံ့ရေး Scope
အသစ်စက်စက်ရီကာဒို, Lijia နှင့် Styer စီးရီးဒီဇယ်အင်ဂျင်
မူရင်း Stamford, Leroy Somers နဲ့ Mecc Alte Alternator သည်
အသစ်စက်စက် Brushless MCA Alternator သည် (အတန်းအစား H ကို, IP23, AVR)
အလိုအလျောက်လွှဲပြောင်း Switch (A.T.S) မီးစက်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်အား
8 နာရီလောင်စာဆီတိုင်ကီနှင့်အတူမိုးသည်းထန်စွာတာဝန်သံမဏိအခြေစိုက်စခန်းသည် frame
အသံတိတ်မီးစက်များအတွက် 2MM-4MM သံမဏိ soundproof မြတ်သော
8 နာရီထက်ပိုကြီးစိတ်ကြိုက်လောင်စာဆီတိုင်ကီ အပြေး
မိုးသည်းထန်စွာတာဝန် 50 ℃ ကြေးဝါကိုရေတိုင်ကီ
မိုးသည်းထန်စွာတာဝန်ရော်ဘာ Anti-တုန်ခါမှု damper
Deepsea7320, Smartgen6110 သို့မဟုတ် ComAp AMF25 မီးစက် controller ကို
အလွန်အေးလွန်းတဲ့ရာသီဥတုဘို့ရေကိုအပူပေးစက် / lub-ရေနံအပူပေးစက်
ထိုကဲ့သို့သော ABB, Schneider နှင့် Siemens အဖြစ်အီလက်ထရောနစ်
Deepsea6020, Smartgen420 သို့မဟုတ် ComAp MRS11 မီးစက် controller ကို
အတူ Cumtomized စူပါအသံတိတ်မိုး High-density ကိုရေမြှုပ်
အနိမ့်ရေနံဖိအား, အပူ, Overload နှင့် overspeed ကာကွယ်မှု
စွန်ခံ-သံမဏိသော့, ရေနံယိုစီးမှုစုပ်စက်, ဖုန်မှုန့်စစ်ထုတ်အဖြစ်အထူးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်း စသည်တို့ကို
ထိုကဲ့သို့သောရပ်တန့်ကေဘယ်လ်, circuirt အနိုင်အထက်, relay ကို, ဆီမီးခွက်, ဖျူးအဖြစ်နိုင်ငံပိုင်စံအီလက်ထရွန်းနစ် စက်ကိရိယာ။
အပိုအင်ဂျင်နဲ့ Alternate အားလပ်ချိန်မှာအဖြစ် filter ကို, gasket, nozzle, AVR, Rectifier
Tool ကို genset ၏စစ်ဆင်ရေးလက်စွဲနှင့်အတူကိရိယာအစုံ, အင်ဂျင်, နဲ့ Alternate
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအဘို့အ tools များ၏အမျိုးပေါင်းနှင့်အတူ Deluxe ကိရိယာသေတ္တာ
ကျွန်ုပ်တို့၏ဒီဇယ်မျိုးဆက် 5. အားသာချက်
① high-နျ Standard ပစ္စည်းများနှင့်အားလပ်ချိန်မှာ
● screw နှစ်ခု, ဝက်ဝံ, ဆူညံသံရေမြှုပ်, ဝါယာကြိုးများ, တုန်ခါမှု-ကိုစုပ်ယူ, ထပ်ဆင့်လွှင်, AVR, diode, gauge, ထင်းရူးထံမှ, ဒါပေါ်မှာကြေးနီဝါယာကြိုး, သံမဏိပြား, မီတာ, controller စဘက်ထရီ AMF, ATS နှင့်ရန်။
② ပညာတတ်-high နှင့်အတွေ့အကြုံရှိပြီးသားသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်း
●အလွန်-ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့နှင့်အတူပါဝါ manufactuer စံ FMW နိုင်ပါတယ်မသာ ယုံကြည်စိတ်ချရသောအရည်အသွေးမြင့်မီးစက်ဒါပေမယ့်လည်း FMW ပါဝါ, ထိုကဲ့သို့သောစူပါအသံတိတ်မီးစက်အဖြစ်မီးစက်အမျိုးမျိုးဒီဇိုင်းနိုင်ပါတယ် ကွန်တိန်နာပါဝါဘူတာရုံ, client ကိုရဲ့ထူးခြားတဲ့တောင်းဆိုချက်များနှင့်အညီအသိဉာဏ်မီးစက်။
●အခမဲ့-ဝန်ဗို့ setting ကိုrange≥ (95-105)% Un
● TR ansient-ပြည်နယ်ဗို့အားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းrate≤ + 20% / - 15%
●အေး / hot-ပြည်နယ်ဗို့ratio≤2%
frequency / မြန်နှုန်း Undulation:
0-100% ကနေ●ပြောင်းလဲခြင်းဝန်, ကြိမ်နှုန်း / မြန်နှုန်း 5% အတွင်းအချိုးတွဲ။
● 25-100% မှ Load, မည်သည့်တည်ငြိမ်ဝန်ကြိမ်နှုန်း / မြန်နှုန်း undulation 0.25% အတွင်း
တယ်လီကွန်း Effect Factor:
● TIF (MA MG1-22) 50 ထက် သာ. ကောင်း၏
2% ထက်● THF (BS EN60034) ပိုကောင်းတဲ့
● ISO8528, GB ကို / T2820
● ISO9001: 2008 အရည်အသွေးထိန်းချုပ်ရေးစနစ်
● insulator တွင်လည်းတော်လှန်ရေး GB5226.1-2002-19.3 နှင့်အညီစမ်းသပ်ခံရ
GB7 နှင့်အညီစမ်းသပ်ခံရ●ဒဏျခံ-ဗို့အား 55-2000-8.1 (60 ဖွငျ့ 1500V နှင့်အတူ)
ညီစမ်းသပ်ပြီး●အားလုံးသည်လျှပ်စစ်အားလပ်ချိန်မှာ GB5226.1-2002-19.6 နှင့်အတူ
●စက်မှုလုံခြုံရေးအညီစမ်းသပ်စစ်ဆေး GB ကိုအတူ / T820.8-2002-6.3
GB ကို / T2820.8-20 နှင့်အညီစမ်းသပ်စစ်ဆေး●မီးသတ်-သက်သေပြချက် 02-6.4 / 6.5
●အားလုံးမီးစက်အစုံ 25%, 50%, 75%, 100% နှင့် 110% Load အားဖြင့်တင်းကြပ်စွာကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်နေကြသည်။
kubota ဒီဇယ်မီးစက် kubota မီးစက်တစ်စုံ kubota Generating set ကို kubota အသံတိတ် Generating set ကို set ကိုထုတ်လုပ် kubota အနိမ့်ဆူညံသံ kubota အရေးပေါ်မီးစက်တစ်စုံ
လွန်ခဲ့သော : 50kw-660kw doosan အင်ဂျင်မီးစက်
သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုသင်တို့အဘို့အဆင်ပြေကြောင်းမည်သည့်လမ်းကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဖက်စ်, အီးမေးလ်သို့မဟုတ်တယ်လီဖုန်းမှတဆင့် 24/7 ရရှိနိုင်ပါသည်။
ဘာသာရပ် : 6kw-30kw Kubota အင်ဂျင် Generator ကို
သငျသညျမေးခွန်းများကိုသို့မဟုတ်အကြံပြုချက်များရှိပါကသတင်းစကားကျွန်တော်တို့ကိုစွန့်ခွာကျေးဇူးပြုပြီးကျနော်တို့အဖြစ်မကြာမီကျနော်တို့လုပ်နိုင်သကဲ့သို့သင်တို့ reply မည်!
7kw-2000kw Perkins အင်ဂျင် Generator ကို
Perkins မီးစက်တစ်စုံ Perkins ဒီဇယ်အင်ဂျင်၏ဖွင့်ထား ပေါင်း Stamford မီးစက်, Leroy Somers မီးစက်သို့မဟုတ်နှင့်အတူ FMW brushless မီးစက် Deepsea, ComAp သို့မဟုတ် Smartgen မီးစက်ထိန်းချုပ်မှု module တွေ။ ပါဝါစ Range: 2000kw မှ 7kw ပွင့်လင်း Frame က Generator ကိုထိုမြတ်သောအမျိုးအစား Generator ကိုနှစ်ဦးစလုံး
ရှန်ဟိုင်းသို့မဟုတ် SDEC မီးစက် set ရှန်ဟိုင်းဒီဇယ်အင်ဂျင်ပေါင်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည် နှင့်အတူ Stamford မီးစက်, Leroy Somer မီးစက်သို့မဟုတ် FMW brushless မီးစက် Deepsea, ComAp သို့မဟုတ် Smartgen မီးစက်ထိန်းချုပ်ရေး module များ။ ပါဝါအကွာအဝေး: 50kw မှ 800kw မှ Open Frame Generator နှင့် Canopy Type Generator နှစ်မျိုးလုံး
20kw-660kw Deutz အင်ဂျင် Generator ကို
Deutz မီးစက်တစ်စုံ Deutz ဒီဇယ်အင်ဂျင်၏တက်လုပ်ပေါင်း Stamford ဖြစ်ပါတယ် Deepsea, ComAp နှင့်အတူမီးစက်, Leroy Somers မီးစက်သို့မဟုတ် FMW brushless မီးစက် သို့မဟုတ် Smartgen မီးစက်ထိန်းချုပ်မှု module တွေ။ ပါဝါစ Range: 660kw မှ 20kw ပွင့်လင်း Frame က Generator ကိုထိုမြတ်သောအမျိုးအစား Generator ကိုနှစ်ဦးစလုံး
50kw-660kw doosan အင်ဂျင်မီးစက်
Doosan မီးစက် Kubota ဒီဇယ်အင်ဂျင်နှင့် Stamford တို့ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည် Deepsea, ComAp ဖြင့်မီးစက်၊ Leroy Somer မီးစက်သို့မဟုတ် FMW brushless generator သို့မဟုတ် Smartgen မီးစက်ထိန်းချုပ်ရေး module တွေ။ ပါဝါအကွာအဝေး: 50kw 660kw မှ Open Frame Generator နှင့် Canopy Type Generator နှစ်မျိုးလုံး
FMW ပါဝါကမ်းလှမ်းမှု မျိုးကွဲ မီးစက် set ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ နှင့်မီးစက် alternator ဆက်စပ်ပစ္စည်း။
Fuzhou FMW Power Co.,LTD. ထက်ပိုမို 15 နှစ်အတွေ့အကြုံနှင့်အတူတရုတ်ထံမှတဲ့ professional ဒီဇယ်မီးစက်ထုတ်လုပ်သူများနှင့်အသိအမှတ်ပြုမီးစက်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းဖြစ်ပါတယ်။
Ricardo Generating set ကို
မူပိုင် © 2015-2020 Fuzhou FMW Power Co., Ltd..မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး.
အခုဆိုရင်အခမဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးတယ် စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ ကျေးဇူးပြု.